Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Pegasus Airlines: Kaarboonka Kaarboonka ee eber ah ee saafiga ah 2050
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga
Pegasus Airlines: Kaarboonka Kaarboonka ee eber ah ee saafiga ah 2050.
Pegasus waxay ku biirtay shirkadaha diyaaradaha ee aduunka ugu horeeya qaraarka lagu gaadhayo "Net Zero Carbon Emissions by 2050" ee lagu ansixiyay Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA) 77aad ee Shirka Guud.
Ballanqaadkan, kaas oo la jaan qaadaya bartilmaameedka Heshiiska Paris ee kulaylka caalamiga ah ee aan ka badnayn 1.5 ° C, ujeedadu waa in la gaaro qiiqa kaarboon eber ah 2050 iyo in laga dhigo duulimaad waara.
Shirkadda diyaaradaha ee Pegasus waxay fulisaa la socodka, warbixinta iyo hagaajinta shaqada qaab dhismeedka ay dejiyeen xeerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah taas oo qayb ka ah dadaalka loogu jiro ilaalinta cimilada iyo la dagaalanka kulaylka caalamiga ah.
Shirkadda diyaaradaha ee Pegasus waxay sii wadi doontaa inay si hagar la'aan ah uga shaqeyso sidii ay u noqon lahayd diyaaradda ugu cagaaran ee Turkiga iyo gobolkaba
Maaraynta hawlaheeda iyo hawlaheeda iyada oo la raacayo hab "deegaan waara", lagu magacaabo Airlines waxay ku biirtay shirkadaha duulimaadka ee aduunka ugu horeeya qaraarka lagu gaadhayo "Net Zero Carbon Emissions by 2050" kaas oo lagu ansixiyay Shirkii 77aad ee Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA). Ballanqaadkan, kaas oo la jaan qaadaya bartilmaameedka Heshiiska Paris ee kulaylka caalamiga ah ee aan ka badnayn 1.5 ° C, ujeedadu waa in la gaaro qiiqa kaarboon eber ah 2050 iyo in laga dhigo duulimaad waara.
Isaga oo ka faalloonaya ku dhawaaqista, Mehmet T. Nane, oo ah maamulaha shirkadda diyaaradaha ee Pegasus, ayaa yiri: “Sida lagu magacaabo Airlines, yaraynta saamaynta taban ee deegaanka iyo ka hortagga wasakhaynta gudaha qaab dhismeedka meertada noloshu waa qayb ka mid ah siyaasadayada deegaanka. Waxaan sidoo kale ku fulinaa la socodka, warbixinta iyo shaqada hagaajinta qaab dhismeedka ay dejiyeen xeerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah taas oo qayb ka ah dadaalka ilaalinta cimilada iyo la dagaalanka kulaylka caalamiga ah. Hadda, sharaf weyn bay ii tahay in aan ballan-qaadno IATA's "Net Zero Carbon Emissions by 2050" xallinta iyada oo lala kaashanayo shirkadaha diyaaradaha ee adduunka ugu horreeya." Mehmet T. Nane ayaa sii waday: "Balanqaadkan, waxaan ku taageernay oo aan ka go'annahay yoolka lagu gaarayo qiiqa kaarboon eber saafiga ah sanadka 2050 anagoo ka faa'iideysanayna fursadaha la siiyay waaxdeena horumarinta tignoolajiyada, annagoo kaashanayna waaxda tamarta iyo isuduwidda daneeyayaasha . Iyada oo la raacayo qaabka habka "deegaan waara", waxaan sii wadi doonaa inaan ka shaqeyno isbeddelka maraakiibtayada iyo mashaariicda ka-saarista kaarboon muddada dhexe; iyo mustaqbalka fog, diirada saara isticmaalka Shidaalka Duulimaadka Sustainable Aviation (SAFs), diyaaradaha tignoolajiyada cusub iyo tignoolajiyada qabashada kaarboonka. Waxaan sii wadi doonaa inaan si hagar la'aan ah uga shaqeyno sidii aan u noqon lahayn diyaaradda ugu cagaaran Turkey iyo gobolkayaga."
Iyada oo qayb ka ah dadaallada socda ee lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada. lagu magacaabo Airlines u dhaqmo si buuxda u hoggaansamaya xeerarka qaybaha ee ay qeexeen mas'uuliyiinta qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee qaab-dhismeedka si loo yareeyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo taas oo muhiim u ah waaxda duulista, oo ay sameeyaan la socodka sannadlaha ah, xaqiijinta iyo ka warbixinta ee qiiqa kaarboon si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Iyada oo muhiimadda la saarayo dhimista qiiqa kaarboonka ee isha, Pegasus waxa ay fulisaa horumarin hawleed oo kala duwan si ay tan u gaadho sida isu beddelka diyaarad yar, iibsashada diyaaradaha hawada sii daaya, yaraynta miisaanka diyaaradda iyo hagaajinta dariiqa. Iyada oo ay ka go'an tahay in la gaaro "Net Zero Carbon Emissions by 2050", iyo iyada oo la raacayo mabda'a daahfurnaanta, Pegasus Airlines waxay bilowday inay ku daabacdo raadkeeda kaarboon bil kasta shabakadeeda xiriirka maalgashadayaasha, laga bilaabo Oktoobar 2021 warbixinteeda. Dhammaan dadaalladan waxaa sidoo kale loo qorsheeyay si la mid ah istaraatiijiyadda maamulka Pegasus ee goobta Joogteynta (ESG - Deegaanka, Bulshada, iyo Shirkadaha) iyo in lagu taageero wax soo saarkeeda.